Mobile နဲ့ ကာတွန်းဖတ်ချင်တယ်ဆို WM Comics | Myanmar Tech Press
နည်းပညာဆိုင်ရာ application များ နည်းပညာအသုံးပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နောက်ဆုံးရသတင်း ၊ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များနှင့် ပြပွဲများ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများ
Mobile နဲ့ ကာတွန်းဖတ်ချင်တယ်ဆို WM Comics
သင်ဟာ Comic ကာတွန်း တွေဖက်ရတာကြိုက်ပါသလား?
ကာတွန်းဆိုတာကို စာအုပ်ဆိုင်မှာဘဲဝယ်လာပြီး ဖက်ရတဲ့အရာလို့ဘဲထင်နေပါသလား?
သင်ဆီမှာရှိတဲ့ Smart Phone နဲ့ ကာတွန်းစာအုပ်တွေကိုဖတ်လို့ရနေပြီဖြစ်တဲ့ ခေတ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။ White Merak ကိုပြုလုပ်နေတဲ့ WM Comics ဆိုတဲ့ App ကို Install လုပ်လိုက်ရုံပါဘဲ။ Smart Phone မှာရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နေရာဘဲသွားသွား ကိုယ်နှင့်မခွာရှိနေပြီး Bus ကားထဲမှာလည်းအလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ထိုအပြင် စာအုပ်ထားရမဲ့နေရာအတွက်လည်းစိတ်မညစ်ရတော့ ဘယ်နအုပ်ဘဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်လိုရပြီး အများကြီးဝယ်လည်းအခန်းထဲရှုပ်ပွမနေတော့ပါဘူး။
နောက်ပြီးညဘက်မီးပျက်လည်း ဖုန်းအားမကုန်သ၍ ဖက်နေလို့ရပါတယ်။
Install လုပ်နည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး Google Play Store ရဲ့ Searh နေရာမှာ White Merak Comics လို့ဖြည့်ပြီး Search လုပ်လိုက်တာနဲ့ထိပ်ဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့ App လေးကို Install လုပ်လိုက်ရုံပါဘဲ။
မိမိကြိုက်တဲ့ကာတွန်းကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၁အုပ်ကို ကျပ်၃၀၀ ~ ၅၀၀အထိကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး အလကားဖတ်လို့ရတဲ့စာအုပ်လည်းအများအပြားရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် အများကြီးဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၁လကို ၁၀၀၀ကျပ်ဘဲကျသင့်တဲ့ စိတ်ကြိုက်ဖတ်လို့ရတဲ့ Plan လည်းရှိတဲ့အတွက် အဲ့ဒီ့ plan ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ သက်သာပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကာတွန်းဆရာတွင်ရေးထားတဲ့ စာအုပ်အပြင် ဘယ်သူမဆို Upload လုပ်လို့ရပြီး တစ်ခြားလူတွေလည်းဖတ်လို့ရတဲ့ System တွေလည်းရှိလို့ ကာတွန်းဖတ်ရုံတင်မကဘဲ ကာတွန်းကိုရေးရတာကိုကြိုက်တဲ့လူတွေလည်း ကိုယ်ရေးထားတဲ့ကတွန်းကိုတင်ပြီး challenge လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
လူကြိုက်များတဲ့ စာရေးဆရာကို လေ့ကျင့်ပေးတဲ့အခိုက်အတန့်လည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
WM Comics ဆိုတဲ့ APP ကိုတည်ထွင်ပြီး လုပ်ဆောင်နေတဲ့ White Merak ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီသည် CEO ဖြစ်တဲ့ ကိုအောင်ရဲကျော်က CTO အနေနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ ကိုနေဦးလင်း ကိုဖိတ်ပြီး ၂ယောက်တည်းစတင်ခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Startup Incubator အဖြစ်နာမည်ကြီးတဲ့ Phandeeyar မှာ အနိုင်ရပြီး Phandeeyar ကနေပြီးထောက်ပံ့မှုကိုခံယူထားပါတယ်။
ယခုလက်ရှိမှာတော့ စမ်းချောင်းမြို့တိုက်ရဲ့ အပေါ်ဆုံးမှာ လှပတဲ့ ရုံးခန်းလေးကိုဖွင့်ထားပြီး နေ့တိုင်းကြိုးစားအားထုတ်နေကြပါတယ်။
ယခုလက်ရှိ App ကို Register လုပ်ထားတဲ့ လူဦးရေက ၃သောင်းလောက်ရှိနေပေမဲ့ ၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ ၂ဆလောက် ကိုတိုးအောင်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
အဲ့ဒီ့အတွက် တင်တဲ့ ကာတွန်းစာအုပ်အရေအတွက်ကိုတိုးသွားပြီး အသစ်တွေကိုလည်း များအောင်လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
နောက်ပြီးအခုကတော့ Android ရဲ့ APP လိုမျိုးဘဲရှိနေသေးပေမဲ့ ios အတွက် တည်ထွင်တာလည်းတော်တော်များများပြီးနေပြီးတော့ မကြာခင်မှာဘဲ ဖွင့်သွားမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကိုဖက်ပြီး စိတ်ဝင်စားတဲ့လူများကတော့ WM comics ကို Install လုပ်ပြီး ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
ငွေချေဖို့လိုတဲ့ ကာတွန်းစာအုပ်ကိုမဖတ်မချင်းတော့ ငွေချေစရာမလိုပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာလည်း White Merak ရဲ့ WM Comics ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုများကိုလည်းစောင့်ကြည့်ကြပါစို့။
← ပညာရေးကိုအားပေးနေတဲ့ ပန်းတိုင် Map website
မိုးကြောင့်အပြင်မထွက်ချင်တဲ့အခါမှာ အစားအသောက်ကိုတော့Yangon Door2Door →